Volamenan’i Pinochet: Lasan’ny Rivotra · Global Voices teny Malagasy
Volamenan'i Pinochet: Lasan'ny Rivotra
Voadika ny 18 Janoary 2018 13:46 GMT
Ny herinandro lasa teo, nahatonga ny bilaogera hanoratra ny vaovao mikasika ny fampiasam-bolan'ny Pinochet amin'ny volamena, tsy ireo bilaogera avy any Shily ihany no nanoratra, fa avy amin'izao tontolo izao koa.
Carololine (ES) namoaka ny tena zava-misy momba ity fivoarana ity, sy ny fihovotrovotry ny vaovao:
Ity “lanja amin'ny volamena” ity dia maherin'ny 100 tapitrisa dolara Amerikana. Misy bolongam-bolamena mihoatra ny 1000 izay mamirapiratra amin'ny anaran'i Pinochet. Nanolotra taratasy ho an'ny minisitra ny Filan-kevitry ny Fiarovam-pirenena, mitaky fitadiavam-bahaolana momba ity fananana ity.
Benjamin (ES), mpianatra avy amin'ny elatra havanana namoaka fifanakalozan-kevitra an'eritreritra momba ny lohahevitra. Hoy izy nanomboka:
“Misy ny volamenan'i Pinochet, na dia tsy misy mahalala aza hoe aiza. Efa nivoaka manerana izao tontolo izao ny vaovao. “
Mbola manohy manazava izy fa tsy misy ny kaontin'ny banky 27 tapitrisa dolara amerikana, nomena an'i Pinochet; 8 tapitrisa dolara amerikana fotsiny izany, saingy tsy nisy nanazava ny vaovao.
Manahy ny olon-kafa fa misy ifandraisany kokoa amin'ny kabary ara-politika ity tantara ity, araka ny fanazavan'i Sebastian (ES) :
Imbetsaka izy ireo no nampino anay fa manjaka foana mihoatra ny zava-drehetra ny marina, na dia voafehin'ny fifandraisana ara-stratejika aza ny toe-draharaha. Miresaka momba ny raharaha Sports-Chile aho amin'izany: mazava ny zava-misy, tsy ara-dalàna ny vola natolotra ho an'ny andrim-panjakana. Natao ho an'ny politikan'ny marimaritra iraisana izany ary rehefa navoaka ampahibemaso ny tantara ratsy, namoaka ny kaonty volamena an'i Pinochet izy ireo- fampahalalam-baovao nomena ny “chancelier”, izay tena diso tanteraka. “